ओ मिनी मङ्किज, मुख धोएर सडकमा ओर्ल
हिजोआज सञ्चार र सञ्जालमा जता हेर्‍यो, बयलगाडाको विचित्रको झाँकी देख्छु म । यो बयलगाडा एउटा अर्थपूर्ण बिम्ब हो, जसमा मकैबारीको बाँदर औतारी गोठालाको भेषमा प्रकट हुन्छ । यो अड्बाङ्गे बिम्बमा अन्नविनाशक बाँदर प्रकट हुनु के छ, म झस्किन्छु । मेरा आफ्नै कानमा आफ्नो मनको चिन्तातुर भाव गुञ्जिन्छ- अहो ! झापाली बाँदरले नाश गर्ने भो त दुनियाँले कत्रा दुःखले फलाएका श्रमिकजनका मकै !
बयलगाडे बिम्ब मकै-ध्वंसक बाँदरविरुद्ध शब्दवाँडको तारो हान्नेहरूका मुखमुखै चर्चामा थियो, यसलाई पहिले सडकमा उतारे कांग्रेसी महलका श्री विश्वप्रकाश शर्माले । बाँदर झापाको, बयलगाडे बिम्बको स्रष्टा पनि झापाकै, बयलको मुक्त झाँकी सडकमा उतार्ने मनुवा पनि झापाकै । गजप छ बा, झापामा जे पनि छ । उपद्र्याहा बाँदर पनि छ, सिर्जनशील मानव पनि छ ।
अहिले मुलुकै बयलगाडामय भएको छ । सत्ताधारी बाँदरको उपहास र विरोधको खुबै दिल बहलाउकारी माध्यम भएको छ बयलगाडा । झापाली विश्वप्रकाशको सिको गर्दै अखिलका युवाहरूले बयलगाडालाई वायुवेगमा देशैभरि बिस्तार गरेका छन् । धन्य हुन् यी विस्तारवादी जोसिला, तेजिला र फुर्तिला युवाहरू ।
सडकको दृश्यावलीमा बयलगाडा मात्र छैन, मकैका गोठालाले सत्ताबाट बलात् लखेटेका मनुवाहरू पनि छन् । अतिशय पद, पैसा र प्रतिष्ठाप्रेमी मनुवाहरू ! ओली-ओलीजस्ता लाग्ने यी मनुवाहरू ओलीकै जस्तो दुच्छर बोलीमा ओलीमाथि जबाफी फतुरको वर्षा गरिरहेका छन् । यिनलाई देखेर सडक अलमल्ल पर्दै आकाशलाई सोध्छ, 'ओ गगन ! को हुन् यी ओलीकै बोलीमा ओलीमाथि खनिने करिबन ओलीहरू ?'
जबाफमा आकाश भन्छ, 'मित्र सडक ! यी ओलीय भाइरस सल्किएका ओलीउन्मुख ओलीहरू हुन् ।'
सडक आकाशलाई पुनः सोधनी गर्छ, 'ओ गगन ! यी पूरापूर ओली हुन नपाएर ओलीको विरोध गर्ने छद्मभेषी ओलीपन्थीहरू हुन् त ?'
सर्वसत्ता, सर्वशक्ति, सर्वसम्पत्ति र नित्य ठाँटबाँट यिनका अति प्रिय चीज हुन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् यिनका अति अप्रिय चीज । बिहान सम्झे यिनको दिनै बिग्रिने, बेलुका सम्झे यिनको निदै हराम हुने चीज ।
यो घतलाग्दो सोधाइको जबाफमा आकाश केवल फिस्स हाँस्दै भन्छ, 'ओ सडक ! सडकलाई म निवेदन गर्छु- जुरुक्क उठेर चोर औँलो ठड्याउँदै यिनलाई सोध- आज ओली भष्मासुर हो, ओली हिटलर हो, ओलीले संविधान कुल्च्यो, ओलीले संसदको बध गर्‍यो भन्दै सडकमा कुर्लिनेहरू हो ! हिजो यिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने आज्ञाकारी सेवक को हो ? हिजो तीन हात उफ्रिएर यिनलाई समर्थन गर्ने परम भक्त को हो ? हिजो यस्ता राजनेता र उस्ता राजनेता भन्दै अखण्ड ममिमामण्डन गर्ने चाटुकार को हो ? हिजोको त्यस्तो देवतातुल्य ओली आज कसरी दानवतुल्य देखियो ? आफू ओलीजस्तै र ओलीजत्रै ओली हुन नपाएर ?'
ओली सर आज होइन, धेरैअघि चिनिएका हक्की र इमानी पश्चगामी हुन् । यिनले लोकलाई कहिल्यै ठाँटेनन् । सर्वसत्ता, सर्वशक्ति, सर्वसम्पत्ति र नित्य ठाँटबाँट यिनका अति प्रिय चीज हुन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् यिनका अति अप्रिय चीज । बिहान सम्झे यिनको दिनै बिग्रिने, बेलुका सम्झे यिनको निदै हराम हुने चीज । बयलगाडा प्रस्टवक्ता ओली सरको गणतन्त्र-घृणाको प्रखर र मुखर बिम्ब हो । ओली सरद्वारा सिर्जित र ओली स्वयम्‌प्रति समर्पित बिम्ब ।
सत्तारोहण गरी गर्नुपर्ने अनिवार्य काम-कर्तव्य थियो- शिशु गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षाको जतनसाथ स्याहार, रक्षा, विकास र सम्बर्धन गर्नु । र, तदनुरूप सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता र जीवनशैलीको विकास गर्नु । यो उदात्त कर्म सम्पन्न गर्न सत्ताको गद्दामा सर्वाधिकारी कार्यकारी कर्ता कसलाई रोजियो ? उनै ओली बयलगाडे सरलाई । जब यो तोरीलाहुरे रोजाइ देखेँ, मेरो मनमा झ्याट्ट एउटा कुरा फुर्‍यो- ल है, ‘कम्निस्ट’ हौँ भन्ने कनिष्ट बाँदरहरूले वरिष्ठ बाँदरलाई मकैबारीको गोठालो बनाए । आखिर जे हुनु अनिवार्य थियो, नतिजा ठीक त्यही भयो । ढ्याके बाँदरले मकै सर्वनाश गर्‍यो । अहिले उनै मसिना बाँदरहरू रुँदै र चिच्याउँदै सडकमा निस्केका छन् । लोभी बाँदरले एक्लै खाएर मकै सक्यो ! एक घोगो पनि हाम्रो भाग लागेन ! ओली भष्मासुर हो ! ओली हिटलर हो !
ओ सडक ! सडकलाई म निवेदन गर्छु- सडकबाट गायब भएको वर्षौँपछि नाटकीय ढङ्गले सडकमा प्रकट भएका सुकोमल देहधारी रुन्चे बाँदरहरूलाई सोध- ओ मिनी मङ्किज ! हन्तकाली लाठे बाँदरलाई मकैको गोठालो बनाउँदा हुने अनिष्ट नतिजा पहिल्यै थाहा थिएन ? बयलगाडे बिम्बको सिर्जनाद्वारा सर्वनाशक बाँदर राम्रैसँग चिनिएको थिएन ? तैपनि उही छटेल जीवलाई प्राणरक्षक अन्नको गोठालो किन रोजियो ? के सत्तालिप्सा, धनलिप्सा र सुखलिप्साको सघन तृष्णाले गर्दा बयलगाडे स्रष्टाको मति र प्रवृत्ति चटक्कै बिर्सिएको थियो ? ओ गनगने मिनी मङ्किज ! इतिहासको ऐनामा आफ्ना अनुहार हेर र इमानको बोली बोल । लाठे बाँदरको यत्रो विरोध गरेको आधा-आधा बाटोमा आधा-आधा सत्ताभाग खान नपाएर हो ?
के सत्तालिप्सा, धनलिप्सा र सुखलिप्साको सघन तृष्णाले गर्दा बयलगाडे स्रष्टाको मति र प्रवृत्ति चटक्कै बिर्सिएको थियो ? ओ गनगने मिनी मङ्किज ! इतिहासको ऐनामा आफ्ना अनुहार हेर र इमानको बोली बोल । लाठे बाँदरको यत्रो विरोध गरेको आधा-आधा बाटोमा आधा-आधा सत्ताभाग खान नपाएर हो ?
सडकमा मिल्किएका मिनी मङ्किज यसरी कुरा गर्दै छन्- मानौँ, ओली सर कलङ्कै-कलङ्कको आहालमा डुबेका हदै घृणित जीव हुन् र यी आफूहरूचाहिँ हुन् दूधले विशुद्ध नुहाएका फटिक एवं कञ्चन जीव । यिनको हिसाबमा शासनतन्त्रद्वारा भए-गरेका यावत दुष्कर्मको अपजसजति जम्मै ओली सरका भागमा, समस्त निर्दोषिताजति यिनको आफ्ना भागमा ! ओ सडक ! सडकलाई म निवेदन गर्छु- यिनलाई सोध- निर्मला हत्याका दसी-प्रमाण सत्ताद्वारा देखादेखी नष्ट गरिँदा तिमीहरू कहाँ थियौ ? लकडाउनको नाउँमा थुप्रा नागरिक भोकै पर्दा तिमीहरू कहाँ थियौ ? काम, दाम र मामबाट वञ्चित भई मलर सदाहरू भोकले मर्दा तिमीहरू कहाँ थियौ ?
ओ सडक ! म निवेदन गर्छु- सोध, कठालाे समातेर यिनलाई सोध- कोरोनाकालमा आँसु र पसिना घोलिएको रेमिट्यान्सले घिटीघिटी अर्थतन्त्रको प्राणरक्षा गर्ने श्रमिकहरूको देश क्रुर ओलीतन्त्रको छायामुनि हराउँदा तिमीहरू कहाँ थियौ ? तिनको दारुण रोदन र क्रन्दनले आकाश सहस्र चिरा पर्दा तिमीहरू कहाँ थियौ ? रैथाने सत्ताधारी गुण्डाहरूद्वारा जातजन्य द्वेषका अस्त्रले नवराज विकहरू मारिँदा तिमीहरू कहाँ थियौ ? लुब्ध ओलीतन्त्रले स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा धरी भकाभक कमिसन खाएर संक्रमितहरूलाई बिनायथेष्ट उपचार मार्दा तिमीहरू कहाँ थियौ ? अगस्ती ओलीतन्त्रले भष्टाचार र कमिसन भक्षण सिरियलको रचना गर्दा तिमीहरू कहाँ थियौ ? ओलीतन्त्रले राज्यका सकल संवैधानिक, प्रशासनिक र वित्तीय संस्था एवं संयन्त्रहरूमाथि एकाधिकार कायम गर्दा तिमीहरू के हेरेर बसेका थियौ ?
सत्तामा भष्मासुरे ओली प्रवृत्तिको हठात् र रातारात जायजन्म भएको किमार्थ होइन । ओ सडक ! म निवेदन गर्छु- सोध, कठालाे समातेर यिनलाई सोध- ओलीय अहङ्कार, स्वेच्छाचार, दुच्छरपन, असहिष्णुता र प्रतिशोधको भावना आँखैअगाडि अंशअंश गरी बढ्दै जाँदा तिमीहरूका आँखा फुटेका थिए ? ओ मिनी मङ्किज ! ओली सरले देलान् र खाऊँला भन्ने आस, लोभ र लालसाले विमति, विरोध र प्रतिरोधकारी तिम्रो चेतना के चाकरी र चाप्लुसीमा निर्लिप्त थियो ?
ओ मिनी मङ्किज ! मुख धोएर सडकमा आओ । दिमागमा ओलीय भाइरसको चर्को संक्रमणका कारण तिमीहरू जहाँजहाँ हिँड्छौ, त्यहाँको सडक ह्वास्सै गनाउँछ । ओ मिनी मङ्किज ! कठोर आत्म-समीक्षा र पश्चात्तापको वैचारिक र नैतिक साबुनले देह र मन नुहाएर मात्र सडकमा देखा पर ।
ओ सडक ! म पुनः निवेदन गर्छु- सोध, कठाला समातेर कोर्रा उज्याएर यिनलाई सोध- ओ ओलीय भाइरस संक्रमित मिनी मङ्किज ! ओली हुन नपाएर ओलीको विरोध लोकलाई नसुनाओ, घिन लाग्छ । सत्तासोख र भोगद्वारा भुँडीदेखि दिमागसम्म बोसो लागेर सुद्धिबुद्धि, अन्तर्दृष्टि, दूरदृष्टि र शरमशून्य हुन पुगेका ओ मिनी मङ्किज ! ओलीको दुच्छर बोलीमा ओलीलाई सराप्न छाड, लोकलाई दिगमिग लाग्छ । ओ मिनी मङकिज ! आफ्नाे बोली बोल- अमानवीय ओली प्रवृत्तिलाई नित्य मलजल गरी हिटलरी प्रतिगमनको यो उचाइमा उकासेबापत रुद्रघण्टीमाथिबाटै सही, अलिकता पश्चात्ताप गर ।
लोभ र लालच एवं दुर्बुद्धि र दुष्कर्मका कारण तिमीहरूको मुख हेरिनसक्नु छ । ओ मिनी मङ्किज ! मुख धोएर सडकमा आओ । दिमागमा ओलीय भाइरसको चर्को संक्रमणका कारण तिमीहरू जहाँजहाँ हिँड्छौ, त्यहाँको सडक ह्वास्सै गनाउँछ ।
ओ मिनी मङ्किज ! कठोर आत्म-समीक्षा र पश्चात्तापको वैचारिक र नैतिक साबुनले देह र मन नुहाएर मात्र सडकमा देखा पर । ओ मिनी मङ्किज ! लोकलाजको सम्मानार्थ कि कमसे कम यति गर, कि गएर ओलीको हंसमा थपक्क विलय होओ । ओ मिनी मङ्किज ! सडकमा यो हेरिनसक्नु, सुनिनसक्नु र सुँगिनसक्नु कुरूप, विरूप र विद्रुप नाटक बन्द गर । ओ मिनी मङ्किज !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, १६:३१:००